Qoysaska Iskuullada Dadweynaha ee Minneapolis ee Loogu Talogalay Sinnaanta
Anagga oo ah waalidiinta, mas’uuliyiinta, xubnaha bulshada iyo barayaasha hoos ku saxiixan ayaa waxaannu ka soo horjeednaa Nakhshadda Degmada ee Dhammeystiran (CDD) ee la soo jeediyay. Waxaannu u heelannahay sinnaanta ardayda Iskuullada Dadweynaha ee Minneapolis oo waxaannu aaminsannahay in ardayda oo dhan ay mudan yihiin deegaan barasho xasillan oo kala duwan.
Maalgelinta arday kasta ee Gobolka Minnesota ee loogu talogalay Iskuullada Dadweynaha ee Minneapolis (MPS) ayaa ka yaraatay in ka badan $3,000 arday kasta laga soo bilaabo 2003 ilaa 2019.Yaraanshaha maalgelinta waxbarashada ee Gobolka oo ay weheliso badashada iskuullada madax-bannaan oo ay dadweynuhu maalgeliyaan iyo hoos-u-dhaca ku yimaaday ardayda lagu qoro Iskuullada Dadweynaha ee Minneapolis (MPS) ayaa horseeday hannaanka Nakhshadda Degmada ee Dhammeystiran ee hadda socda.
Nakhshadda CDD ayaa sheegaysa in ay ku saabsan tahay suulinta ama baabi’inta farqiga u dhaxeeya guul-gaaridda isirrada kala duwan ee Iskuullada Dadweynaha ee Minneapolis (MPS). Suulinta farqiga guul-gaaridda ee u dhaxeeya ardayda aan caddaanka ahayn iyo ardayda caddaanka waa mudnaan ay tahay in aannu si dhab ah u qaadanno. Iyada oo sidaa la yiri, ayaa haddana nakhshadda CDD kaliya ku dambeyn doonta sameynta waxyaabahan soo socda oo leh saameyn isdiida:
1) Abuurista xasillooni la’aanta dhammaan ardayda dhigata Iskuullada Dadweynaha ee Minneapolis (MPS). Soo-jeedinta degmooyinka ayaa u baahan doonta 60% ee dhammaan ardayda in ay iskuullada iska beddelaan. Taasi macanaheedu waa in arday ay tiradoodu ka badan tahay 21,000 ay iskuullada iska beddeli doonaan. Tani uma wanaagsanna waxbarashada, tani uma wanaagsanna qoysaska, tani uma wanaagsanna Minneapolis.
2) Nakhshadda CDD iyo Suulinta K-8 ee Iskuullada Dadweynaha ee Minneapolis (MPS) waa siyaasad cunsuri ah. Si ka duwan yoolka la sheegay ee degmooyinka ee ah in sinnaan badan loo abuuri dhammaan ardayda, ka guuridda nidaamka K-8 ayaa si aan isku dheellitirnayn u saameyn doonaa ardayda midabka. 70% ee ardayda lagu khasbi doono in ay iskuullada iska beddelaan iyada oo ay sababtu tahay isbeddelakan ayaa waxaa ay noqon doonaan carruurta aan caddaanka ahayn.
3) Saameynta ciyaar-dubnadeeda. Ka guurista iskuullada K-8 ayaa mustaqbalka waxaa ay horseedi kartaa buux-dhaafka iyo in iskuul la xiro. Iyada oo la adeegsanayo saadaasha iyo tallaabooyinka iskuullada ayaa ka guurista K-8 sidoo kale horseedi doonta buux-dhaafka iskuullada qaar iyo in uu hoos-u-dhac mug leh uu ku yimaado isku-qoritaanka qaar kale; taas oo iyada keeni karta in iskuulladaasi la xiro.
4) In kaliya la yareeyo tirada iskuullada lagu aqoonsan karo kala duwanaanta jinsi ama isir la mid ma aha sinnaan. Nakhsahdda CDD ayaa waxaa ay si cad u qiraysaa tani – hababka lagu adeegsaday daraasadan ma qaadayaan in wax isbeddel ah lagu sameynayo si fiican u aqoonista xisaabta ama akhriska ee arday kasta oo degmada ku sugan, waa kaliya dib-u-qaybinta ardayda hadda jirta. 60% ee ardayda ayuu saameyn doonaa, iyada oo aan la sheegayn WAX faa’iido waxbarasho ah. Tani waa tallaabo lagu dhaqaaleynayo kharashka gaadiidka -- joogsi oo wax xiriir ah lama laha sinnaanta Iskuullada Dadweynaha ee Minneapolis.
Waxaan dooranay iskuulladan sababtoo ah waa deegaanno bulsho ahaan iyo horumarin ahaanba ku habboon barasho fudud.Waxaan wayddiisanaynaa in Golaha Iskuullada Minneapolis ay nala midoobaan oo ay ka soo horjeestaan nakhshadda CDD oo ah sida uu soo jeediyay maamulka Iskuullada Dadweynaha ee Minneapolis (MPS).
Magaca Hore * (First Name) *
Magaca Dambe * (Last Name) *
Bulshada Iskuulka * (School Community) *
Cinwaanka iimaylka ee aan kan shaqada ahayn * (Non-Work Email)
Telefoonkaaga gacanta ee shaqsi ahaaneed (Cell Phone)
Waxaan doonayaa in la igala soo xiriirto sidii aan wax badan uga qaban lahaa joojinta Nakhshadda Degmada ee Dhammeystiran ee Iskuullada Dadweynaha ee Minneapolis (MPS) * (Want to be contacted about doing more) *